Indlela yokubonisa ikhadi leshishini kumthengi ngendlela yoyilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Indlela yokubonisa ikhadi leshishini kumthengi
UPablo Gondar | | Izixhobo zoYilo, Izibonelelo, Tutorials
Njani bonisa amakhadi oshishino kumthengi ngendlela enobuchule kunye nobungcali ukuthengisa ngcono isindululo sethu somzobo. Ikhadi leshishini njengalo naluphi na uhlobo loyilo akufuneki lithengiswe okanye liboniswe kumthengi njengomfanekiso olula omnye phambi kwesikrini kodwa kunokuba Kufuneka sizame ukusondeza abathengi kwimveliso yabo okokugqibela kubonisa uyilo olusondele kakhulu kwelokugqibela.
Inkcazo elungileyo iyinto esisiseko kuyilo ukuba siyafuna ukutsala abathengi bethuKungenxa yoko le nto kufuneka sisebenzise izixhobo ezithile ukuphucula intetho yethu kumxhasi. Isixhobo esisetyenziswa ngokubanzi kukusetyenziswa kwe Ukuhamba ukwenza ukulinganisa ukuba umsebenzi uza kuba njani kwifomathi yayo yokwenyani, oko ke kuphucula ukubonakaliswa kwinqanaba lomzobo nakwinqanaba lembono, kuba umxhasi uya kuyiqonda ngcono le nto siyilungiselela yena.
Xa sisebenza kunye nomxhasi kwiprojekthi yemizobo kubalulekile yenza ukuba umxhasi atsaleleke kwiprojekthi yethu, oku kufuneka sisebenzise yonke imizobo endiyifumanayo phucula umbono wethu. Sinokusebenzisa ezethu iifoto ukwenza iimockups kufutshane nenyani okanye sebenzisa iimockups de InternetNokuba sithatha siphi isigqibo, kufuneka sisoloko sikwenza sisebenzisa ingqiqo yeprojekthi esiyiphuhlisayo, umzekelo, ukuba uyilo lwethu lolwenkampani yesonka, ngekhe kulunge ukusebenzisa mockup Kwelinye icala, ukuba besinokuyifaka kwiingxowa zamaphepha ezirisayikilishwe, amalaphu etafile, njl.
Sebenzisa un mockup yinto elula kakhulu kwaye ekhawulezayo enkosi ngoncedo lweenkampani ezinikele ekudaleni iimockups ezethu esinokuzifumana kumnatha Khuphela zombini simahla kwaye zihlawulwe.
1 Amaqhinga ukubonisa ikhadi leshishini:
2 Uyikhuphela njani i-mockup
Amaqhinga ukubonisa ikhadi leshishini:
Sebenzisa iimockups ezihambelana neprojekthi yethu )
Bonisa enye ikhadi eliprintiweyo (ukuba kuyenzeka)
Fundisa umthengi ngeendlela ezahlukeneyo Iindidi zamaphepha ngokwasemzimbeni ukuze ukhethe
Uyikhuphela njani ifayile ye mockup
Kule meko siza kuthi Khuphela a mockup kwikhadi leshishini, siya kufunda ukuba singongeza njani uyilo lwethu ukufikelela kwisiphumo somtsalane ngakumbi.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ngenisa unxibelelwano ukukhuphela yethu mockup lwekhadi leshishini, unokukhuphela naluphi na uhlobo loyilo ukuba awuyithandi le ndiyongezileyo.
Nje ukuba sibe nayo mockup kukhutshelwe into esiza kuyenza uyivule kwaye uyivule Photoshop Ukuqala ngoyilo lwamakhadi eshishini.
Xa siyivulile ngaphakathi Photoshop siza kubona ukuba yintoni ekhoyo izaleko ezibini eziqaqanjiswe ngombala obomvu, Kulapho kufuneka sibeke uyilo lwethu khona ukuze longezwe ngokuzenzekelayo kumboniso wangaphambili.
Siphinda kabini konqakrazo kwezi zaleko kwaye umaleko omtsha uya kuvula ngokuzenzekelayo kuwo Photoshop. Xa sinoluhlu oluvulekileyo konke ekufuneka sikwenzile kuku lungelelanisa uyilo lwethu ukuze mockup emva koko hit hit.
Ngomzuzwana siye sakwazi ukwenza ukuba ikhadi lethu leshishini libe nomtsalane ngakumbi ukuba libe nomtsalane ngakumbi kumthengi. Sebenzisa olu hlobo lwe iinkqubo zemizobo iluncedo kakhulu kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi ezibonakalayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Indlela yokubonisa ikhadi leshishini kumthengi
Awona maqonga alungileyo olawulo lweendaba
Gqamisa into evela kumfanekiso wonke